Video Hawwissoo WBO Isin Bira Jirra Qeerroo 2015 -
‪#‎OromoProtests‬– Remembering fallen Qeerroo at this intense moment for the Rise of Our Future Qeerroo. Once again, we saluting them for the great sacrifices they are paying to defend our ancestral land and cultural way of life.
― Nelson Mandela, Long Walk to Freedom: The Autobiograpy of Nelson Mandela with Connections.
3 thoughts on “Video Hawwissoo WBO Isin Bira Jirra Qeerroo 2015”
Aja’aiba!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kanumma video waga mekaan durra warabamee gammojji Ertirea kessati huddu kessan awwaltaan affan banttu. Hoo dhirrummaan issin kessa jiraatee, Bakka jaarttiinif jaarssoleen , ejjoleen fi Qerron etti warregamma jirraanitti off agarsissa. Duu’awaani!!!!!!!! Kanni ammafi hintaannee yoomifi hinjirra jeettaanii laffaa dhittaani! Q
what is the reason to post this outdated video recorded in Asmara? It does not change anything on the ground in Oromiyaa…
You guys are sick …. you think akka qabsoorra jiratnitti of laaltan.
sirbaaf baynii morma dhofatan jedhani mammaku yaro tokko tokko .
sirba isin asi sirbitan woyaaneen oduu godha jirtu .sababni isaas isaan sirbani hin dhufne. qawween dhufan waan ta’e. kijiba dhiisa qawwe dhukaasa . namni loluu guute hoggana maqa baate deemu kanatu sammu nama heddu chinqe. ykn hin lolan ykn hayyama baatani ganada keessa soch’a itti nyaatan nama kennani. ABO nuti keessa dhalanne har’a yoo nun dhaqabin yoomi mo gaafa biyyi bilisa baate nutu lola turee jedhani aango irra woli fixuuf. amma isin argine ertiraya teetani bilisa nu baasatan kijibdooda. Gaafa isin biyya galatni baatan ani gaafa sani ijillele quba qabu garu seenan ni baratama waan ta’eef bira gaye. jaarsa tokkotu waan jedhe leenco bira dhaabate dubachuuf qoonqoon nu duudde dhiisuuf garaan nu guute jedhe. kanaaf ABO.WBO,KWB. KIJIBA maqa gara garatiin asi achii yaatani ofille dhamatani ummatas dhamastan dhiisa . gala lola yaro kamu chaala sabni keenna tokko ta’e . kana booda yo isin adaan facaaftan male akkuma aada keesani . sababa gurgurattani biyya yaatan. kuni worra afirka keessa jiru hin laalatu.